Quibi Waxay Dhacdaa Qaar Dhacdooyin Argagax Leh Oo Ka Socda YouTube-ga Daawadeyaasha TV-ga
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Quibi Waxay Dhacdaa Qaar Dhacdooyin Argagax Leh Oo Ka Socda YouTube-ga Daawadeyaasha TV-ga
Quibi waxay isku diyaarineysaa inay xirto dalabkeeda gaarka ah muddo saddex bilood oo bilaash ah muddada tijaabada oo waxay siinaysaa macaamiisha suurtagalka ah aragti kooban waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyaga oo aan u baahnayn inay soo dejiyaan barnaamijka.
Cudurka faafa ee coronavirus ayaa laga yaabaa inuu si weyn u carqaladeeyay qaabka moobiilka ee Quibi uu isku dayayay inuu soo baxo. Foomka qaab-dhismeedka kooban ee kooban ayaa leh qaar ka mid ah magacyada waaweyn ee Hollywood ee ka qayb qaata mashaariicda, laakiin dadka guryaha la dhigto qaybta la qaadan karo ee adeegga laga yaabee inaysan xiiso badan ka helin macaamiisha.
Bilaabashadu waxay soo saartay qaybo ka mid ah Ciyaarta khatarta badan, shisheeyaha iyo Dumarka boggeeda YouTube-ka oo inta badan loo adeegsaday sidii buug-yaraha iyo buug-yaraha trailer.
In kasta oo madalku martigaliyo cinwaano episodic ah, waxay kaliya siinayaan daawadayaasha cutubka koowaad waxayna waydiisanayaan inay isdiiwaan galiyaan si ay u arkaan inta hartay.
Taageerayaasha naxdinta leh ayaa laga yaabaa inay rabaan inay hubiyaan Shisheeyaha, waxaa lagu soo daray horudhaca YouTube.
Waa tan burburka shirqoolka:
Darawal dhalinyaro ah oo aan isla weyneyn ayaa lagu tuuray riyadeedii ugu xumeyd markii rakaab Hollywood ah oo qarsoodi ah uu galo gaarigeeda. Socdaalkeeda argagaxa leh, wadna-istaagga ah ee ay la gashay Shisheeyaha ayaa soo ifbaxaya in ka badan 12 saacadood oo argagax leh iyada oo dhex mushaaxaysa hoosta sharka ah ee Los Angeles ciyaar dhabarka-qaboojinta ah ee bisadda iyo jiirka. ”
Sidoo kale Ciyaarta khatarta badan waxaa laga yaabaa inaad xiisayso xiisahaaga:
Dodge Maynard ayaa aqbashay in uu ka taxadro xaaskiisa uurka leh ka hor inta uusan cudurka u dhiman noloshiisa qaadan, Dodge Maynard ayaa aqbashay dalab ah in uu ka qeyb galo ciyaar lagu dhinto halkaas oo uu dhawaan ku ogaan doono in uusan aheyn ugaarsade - laakiin uu yahay ugaadha.
'Bisadaha' Butthole Cut waa halkan oo xitaa way ka cabsi badan tahay asalka
Shudder's 'Creepshow' wuxuu iibiyaa dalal badan oo dibedda ah